2022 ụgbọala Honda Passport na -eme mkpọtụ ịsọ mpi n'usoro American Rally Association
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » 2022 ụgbọala Honda Passport na -eme mkpọtụ ịsọ mpi n'usoro American Rally Association
Otu ndị injinia Honda na -agba ọsọ ịgba ọsọ ọhụrụ Honda Passport. Honda kpughere ngwongwo ihe nrịba ama nke Passport 2022 nke ndị Honx Performance Development (HPD) Maxxis Rally wuru maka asọmpi, na -egosipụta ike na -adigide na ịdịte aka nke etinyere n'ime ụgbọ ala ọkụ Honda.
N'igosipụta ụdị ọgbara ọhụrụ nke Passport 2022, gwongworo ngagharị iwe mere asọmpi ịgba ọsọ ya na Lake Superior Performance Rally (LSPR) na Michigan n'October 15 na 16. Ọ ga-asọ mpi n'usoro American Rally Association (ARA) nke nnọkọ mmechi mechiri emechi. ihe omume site na oge 2022 na klaasị 4WD nwere oke.
Otu ihe atụ dị mkpa nke Honda “Mmụọ ịgba ọsọ,” ndị otu ịgba ọsọ HPD Maxxis Rally mejupụtara ndị mmekọ Honda dabere na ụlọ ọrụ Ohio Development Auto Auto. Ndị otu a bụ ndị enyemaka buru ibu nke Honda of America Racing Team (HART), nke nwere ndị mmekọ sitere na mmepe na ụlọ nrụpụta n'ofe North America.
Site n'ụgbọ ala agbagharị agbagoro na-eru ihe ruru 100 mph na usoro emechiri emechi ala nke gụnyere gravel, unyi, apịtị na snow n'okporo ụzọ na-ekpuchi ọtụtụ narị kilomita, usoro ARA National na Regional Championship na-asọ mpi. N'ọsọ LSPR, engineer Honda Chris Sladek bụ onye na-eme mkpọtụ mkpọsa Honda Passport, onye na-enyocha ule nkwụsị nke dabere na ụlọ ọrụ Ohio nke dị na North American Auto Development Center, yana Gabriel Nieves, onye injinia na-emepụta chassis dabere na. otu ihe ahụ.
Maka oke traction na arụmọrụ, ụgbọ ala mkpọsa Passport dabara na BRAID Winrace T wheel wheel (7.5 ″ x17 ″) nke agbakwunyere na Maxxis ogbo ngosipụta gosipụtara RAZR M/T ma ọ bụ taya RAZR A/T (265/70-R17) , dabere na ọnọdụ ihe omume. Ejiri nke 1/8 ″ -inch siri ike mmanụ pan aluminom na efere azụ skid dị iche iche na-echebe ihe dị n'okpuru, yana akwa polyethylene dị elu nke na-ekpuchi tank mmanụ na ihe ndị ọzọ. Mpekere breeki Carbotech XP12 na mmiri breeki na-agba ọsọ dị elu na-enye arụmọrụ braking na-agbanwe agbanwe na-achọ gburugburu nnọkọ.
N'ụzọ dị ịtụnanya, nrụpụta Passport 3.5-lita i-VTEC® V6, nnyefe ọsọ ọsọ 9 na ndị na-ebugharị ụgbọ mmiri, sistemụ njikwa torque nwere ọgụgụ isi (i-VTM4 ™), na-ahapụkwa ihe nkwusioru niile ka edozighị ya maka asọmpi; Nanị mgbakwunye bụ ngwa nju oyi na -ebufe akpaka site na ngwugwu akwa dị na Passport. Onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ na -eji ọnọdụ nnyefe na usoro nnyefe ụgbọ mmiri maka njikwa nkwalite, a na -ejikwa ọnọdụ Sand sand nke Njikwa Ọgụgụ Njikwa Paspọtụ maka nkesa torque kacha mma na arụmọrụ na mbara rụrụ arụ.
"Eziokwu ahụ bụ na anyị agaghị eme mgbanwe na ụgbọ ala Honda Passport ma ọ bụ nkwusioru nke 2022 maka ụdị ntaramahụhụ na asọmpi a na -egosipụta oke ike na arụmọrụ nke na -abịa na ọkọlọtọ na Passport," onye injinia Honda na onye na -agba ọsọ Chris Sladek kwuru. .
Maka nchekwa ọzọ, ime n'ime ụgbọ ala mkpọsa Passport gụnyere oche ịgba ọsọ OMP nwere oghere asọmpi isii, oghere mpịakọta nchekwa, sistemụ mgbanyụ ọkụ, kọmpụta mkpokọta na sistemụ nkwukọrịta ụgbọ ala. Iji belata ibu, e wepụrụ oche azụ, kapeeti, mkpuchi ụda, na iberibe ihe ndị ọzọ dị n'ime ime, wee jiri iko Lexan polycarbonate dochie akụkụ SUV na windo azụ. Ihe njide breeki aka hydraulic na-akwalite mmegharị ahụ site n'akụkụ siri ike, ebe ikuku na-agbanwe agbanwe na-emepụta ụda mbinye aka mbinye aka. HPD chepụtara ya, eserese eserese mpụta na paspọtụ na -egosipụta ike na mbibi nke Honda Passport.
"Anyị adịla njikere iji Passport Honda 2022 siri ike," onye injinia Honda na onye ọkwọ ụgbọ ala Gabriel Nieves kwuru. "Ọ ga -abụ nnukwu oge."
Na 2021 Lake Superior Performance Rally na Ọktọba 15 na 16, ndị otu asọmpi na usoro ARA East Regional. Daybọchị mbụ nke asọmpi a nwere usoro ọsọ ọsọ nwere akụkụ na -asọ asọ wee gbaga n'ime abalị, ebe ogwe ọkụ inyeaka nke Passport dị mkpa na ijigide ọsọ asọmpi site n'oké ọhịa. Ndị otu ahụ na-agbakarị oge n'etiti ndị isi iri n'ime mmadụ iri anọ na anọ na asọmpi mpaghara, mana taya de-bead na ogbo 10 mere ka ndị otu ahụ laghachi azụ, na-eme ka ha gwụchaa ihe karịrị nkeji 42 karịa oge a tụrụ anya ya.
Usoro teknụzụ, nke siri ike, na udu mmiri na -echere maka ụbọchị nke abụọ, yana Paspọtụ na -arụ ọrụ nke ọma na taya Maxxis RAZR M/T ya. Ndị otu a na -ebipụta oge oge n'etiti ndị asọmpi mpaghara 15 kacha elu.
Ndị otu ahụ mechara 22nd n'ime ndị asọmpi mpaghara 42, tinye 4th n'ime ndị asọmpi 6 na klaasị 4WD nwere oke.
2021 LSPR bụ emume ngagharị iwe nke atọ nke ndị otu ahụ asọmpi na Passport Honda. N'oge mmemme mbụ ya - 2019 Southern Ohio Forest Rally (SOFR), dị ka akụkụ nke usoro ARA East Regional -otu ahụ tinyere 2nd na klaasị 4WD nwere oke na 12th n'ozuzu n'ime ndị asọmpi 75.